6 Tusaalooyinka Qalabka Suuqgeynta Isticmaalka Sirdoonka Artificial (AI) | Martech Zone
6 Tusaalooyinka Qalabka Suuqgeynta Isticmaalka Sirdoonka Artificial (AI)
Sirdoonka macmal ah (AI) waxay si dhakhso ah u noqotaa mid ka mid ah ereyada suuq-geynta ee ugu caansan. Iyo sabab wanaagsan - AI waxay naga caawin kartaa in aan otomaatig u samayno hawlaha soo noqnoqda, shakhsiyaynta dadaallada suuq-geynta, oo aan samayno go'aamo wanagsan, si degdeg ah!
Marka ay timaaddo kordhinta muuqaalka calaamadda, AI waxaa loo isticmaali karaa dhowr hawlood oo kala duwan, oo ay ku jiraan suuq-geynta saamaynta, abuurista nuxurka, maareynta warbaahinta bulshada, jiilka hogaanka, SEO, tafatirka sawirka, iyo in ka badan.
Hoosta, waxaanu eegi doonaa qaar ka mid ah qalabka AI ugu fiican ee suuq-geeyayaasha kuwaas oo hagaajin kara beddelka ololaha, sare u qaadi kara waxtarka, iyo kor u qaadida muuqaalka bogga:
AI-Waday Influencer Suuq
IMAI waa madal suuqgeyneed oo saameyn ku leh AI oo noo ogolaaneysa inaan helno kuwa saxda ah ee summadaha, la socoshada waxqabadkooda, oo cabbira ROI. Walaxda ugu muhiimsan ee IMAI waa aaladeeda daahfurka ee awooda badan ee AI taasoo awood u leh inay raadiso oo ururiso xogta kuwa ugu saamaynta badan Instagram, Youtube, iyo TikTok.
AI waxay siisaa fursad summadaha si ay u helaan oo ay bar-tilmaameedsadaan inta badan saameeyayaasha warshadahooda. Awoodda AI ee ah in ay si dhakhso leh u soo bandhigto saameeyayaasha waxay u oggolaaneysaa IMAI inay yeelato mid ka mid ah xogta ugu adag.
Amra Beganovich, madaxa hay'adda suuq-geynta dhijitaalka ah Camra & Elma
Tusaale ahaan, soo saaraha baabuurta ee raba inuu ogaado dadka saameeya baabuurta ee xiiseynaya baabuurta isboortiga kaliya waxay awoodi doonaan inay helaan safiiro sumad leh oo suurtagal ah iyagoo isticmaalaya AI iyada oo aan loo baahnayn in ay gacanta ka raadiyaan warbaahinta bulshada. Awooddan lagu soo koobay kartida ugu badan ee u dhiganta bartilmaameedka astaanta astaanta waxay caawisaa kordhinta beddelka saamaynta waxayna kordhisaa ololaha ROI.
Hel IMAI Demo
AI-Waday content abuurkii
Quillbot waa kaaliyaha qoraalka ee ku shaqeeya AI kaas oo gacan ka geysan kara abuurista waxyaabo ka sii fiican, dhakhso leh. Waxay isticmaashaa habaynta luqadda dabiiciga ah (NLP) in la falanqeeyo qoraalka iyo soo jeedinta talooyin ku saabsan sida loo horumariyo qayb qoraal ah. Tusaale ahaan, Quillbot waxa uu soo jeedin karaa kelmado kale ama odhaahyo, soo jeedin kara ereyo la mid ah, ama xitaa bixin kara talooyinka naxwaha.
Isticmaalka AI si aan uga caawino abuurista nuxurka waxay noo ogolaaneysaa inaan horumarino suuq-geyntooda iyo shaqsiyeynta boggayaga iyo waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada. Tusaale ahaan, AI waxay noo ogolaataa inaan kordhino rafcaanka bogga soo degista ama boostada blog anagoo soo jeedinaya talooyin ku saabsan erayada ama tibaaxaha laga yaabo inay u muuqdaan kuwo aad u jilicsan oo caajis ah.
Eliza Medley, maareeyaha nuxurka Soo dhaweynta
Quillbot waxa ay leedahay sifooyin dhowr ah oo ku caawin kara oo ay ku jiraan hagaha qaabka, hubiyaha been abuurka, iyo dhibcaha akhriska. AI waxay ku siin kartaa hagitaan ku saabsan dib-u-bixinta maqaallada ama jumladaha oo ka dhigaya kuwo aad u xiiso badan.
Isku day Quillbot
AI-Waday Maareynta Warbaahinta Bulshada
Kulan waa qalab lagu maamulo warbaahinta bulshada oo ay ku shaqeyso AI kaas oo ka caawiya in si toos ah loo dhigo baraha bulshada. Waxay noo ogolaataa inaan abuurno baaldiyada nuxurka ku salaysan mawduucyada, ereyada muhiimka ah, ama xitaa hashtags. Software-ku wuxuu markaa buuxinayaa baaldiyadaas waxyaabo ka yimid ilo kala duwan, oo ay ku jiraan quudinta RSS, baloogyada, iyo maqaallada.
Ku-joogista isbeddellada ugu sarreeya waxay siisaa summadaha fursad ay ku abuuraan nuxur macno leh dhagaystayaashooda. Adigoo ka faa'iidaysanayna AI si aan u ururino xogtii ugu dambeysay ee la xiriirta warshadaha, waxaan wanaajin karnaa istiraatiijiyadayada warbaahinta bulshada si aan si wanaagsan ula xiriirno dhagaystayaasheenna.
Reynald Fasciaux, COO ee Studocu
MeetEdgar waxay noo ogolaataa inaan sidoo kale jadwal u samayno qoraaladayada, waxayna hubisaa in nuxurkayaga la dhajiyay wakhtiyada ugu fiican ee ka-qaybgalka. Tusaale ahaan, haddii aan haysano boosteejo baloog ah oo aan rabno inaan ku wadaagno warbaahinta bulshada, MeetEdgar waxay noo oggolaan doontaa inaan marka hore u wanaajino wararka warshadaha ugu xiisaha badan iyo kuwa ugu dambeeyay, ka dibna waxay wadaagi doontaa boostada waqti gaar ah oo ku saleysan waxqabadka dhagaystayaasha. naqshadaha.
Isku day Edgar bilaash
AI-Waday Generation Lead
LeadiQ waa aalad soo saarista rasaasta AI ku shaqeysa oo naga caawisa inaan helno oo aan u qalano hogaanka, dhaqso.
LeadiQ adeegsada tiro ilo xogo kala duwan ah si ay u helaan hogaan, ay ku jiraan warbaahinta bulshada, looxyada shaqada, iyo buugaag ganacsi. Marka LeadIQ ay hesho hogaanka, waxay isticmaali doontaa NLP si ay u falanqayso joogitaanka internetka oo ay dhaliso hogaanka iyada oo ku saleysan suurtogalnimada ay xiisaynayaan badeecada ama adeegayada.
Isticmaalka AI si otomaatig ah dadaalka horumarinta ganacsiga waxay siisaa fursad lagu sii xoojiyo tayada cilaaqaadka ka dhexeeya sumadaha iyo macaamiisha. Waxay siisaa fursad aad diiradda u saarto dhinaca bini'aadamka ee cilaaqaadkaas iyada oo wakhti ku badbaadinaysa buug-gacmeedka iyo mararka qaarkood habka sahaminta macmiilka oo aad u dhib badan.
Berina Karic, maareeyaha suuqgeynta ee Wakaalada Suuqgeynta Saamaynta Sare
LeadiQ waxa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo ololayaal kobcinta rasaasta rasaasta oo toos ah, si aan u sii wadi karno la shaqaynta hogaankeena xitaa haddii aanay diyaar u ahayn inay isla markiiba iibsadaan. Tusaale ahaan, waxaan diyaarin karnaa software-ka si aan ugu dirno iimaylo taxane ah hogaanka waqti ka dib, ama xitaa aan siino wac haddii aysan ka soo jawaabin iimaylkaaga.
Ku Bilow LeadiQ bilaash
Hagaajinta Matoorka Raadinta ee AI-Driven
Moz Pro Waa Hagaajinta Matoorka Goobid ee ku shaqeeya AI (SEO) qalab caawiya hagaajinta mareegaha matoorada raadinta.
Moz Pro waxay isticmaashaa ilo xogeedyo kala duwan si ay u falanqeyso degelka oo ay u bixiso talooyin ku saabsan sida loo horumariyo astaanta SEO.
Moz waxa uu noo ogolaadaa in aan ku soo koobno ​​ereyada adag ee hooseeya, oo aan ogaano ereyada muhiimka ah ee laga yaabo in ay iska indhotiraan tartamayaashu. Tani waxay siinaysaa fursad lagu horumariyo istaraatijiyad suuqgeyneed oo ku salaysan hab lafo-gur halkii laga qiyaasi lahaa, tusaale ahaan abuurista qoraalo ama bogag degenaansho kuwaaso aragti ahaan u dhawaqaya laakiin laga yaabo in aanay helin taraafikada.
Chris Zacher, Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Maaddada ee Isdhexgalka
Moz Pro wuxuu caawiyaa helida ereyada muhiimka ah ee ugu hufan ee la beegsado, wuxuu bixiyaa talooyin lagu hagaajinayo ciwaanka website-ka iyo calaamadaha meta, iyo dabagalka darajooyinka waqti ka dib. Waxay leedahay tiro ka mid ah sifooyin kale oo gacan ka geysan kara hagaajinta SEO-ga sumadda, oo ay ku jiraan qalabka dhismaha isku-xidhka, qalabka xisaabinta goobta, iyo qalabka falanqaynta tartanka.
Bilow Tijaabadaada Moz Pro
AI-Waday Sawiridda Sawirada
Luminar AI waa tifaftire sawir oo ka faa'iideysta AI si loo fududeeyo tafatirka sawirka oo uu uga dhigo mid la heli karo bilawga ama sawir qaadayaasha raadinaya inay si dhakhso leh wax uga beddelaan cabbirka. Waxay siisaa dadka isticmaala awood ay ku abuuraan sawirro Photoshop u eg iyadoo dhowr gujis oo keliya ay si toos ah u akhrinayaan sawirka oo ay u aqoonsanayaan dhinacyo kala duwan, oo ay ku jiraan asalka, astaamaha wejiga, dharka, iyo in ka badan.
Luminar waxay siisaa fursad khubarada aan Photoshop ahayn inay abuuraan qaybo gaar ah oo ka kooban waxyaabo ay u badan tahay inay helaan ka-qaybgal iyo beddelaad. Dhawr gujin oo keliya, waxaan hagaajin karnaa gadaasha sawirka, maqaarka siman, indhaha dhalaalaya, iyo dhamaystirka hawlo kale oo dhaqan ahaan u baahan saacado tafatir ah.
llija Sekulov, Suuqgeynta Dijital ah & SEO ee Boostada
Hoos ka eeg Luminar AI
Mustaqbalka AI ee Suuqgeynta
Aaladaha AI waxay si weyn u wanaajin karaan dadaallada suuqgeynta iyagoo u oggolaanaya suuqgeynayaasha inay hagaajiyaan hufnaanta, kordhiyaan muuqaalka, kor u qaadista beddelka, iyo in ka badan! Waxay si dhakhso ah u noqonayaan qayb ka mid ah dadaalladayada suuq-geyneed ee maalinlaha ah waxayna u badan tahay inay ku ballaariyaan hawlo badan oo aan dhammaystirno markaan koreyno sumadda. Adigoo ka faa'iidaysanayna AI si aan u wanaajino ololayaashayada, waxaan si otomaatig ah u samayn karnaa hawlaha, shakhsiyaynta suuqgeyntooda, oo ugu dambeyntii samayn karnaa go'aamo wanagsan, dhakhso leh!
Tags: aiqalabAmra iyo Elmasirdoonka macmalqalabka sirdoonka macmalBerina karicchris zacherwax abuurista aiContent Suuqcontent marketing aiEdgartafatirka aiimaysuuqgeynta suuqgeyntainfluencer marketing aiis-dhexgalkahogaaminLija Sekulovluminar aiboosteejadakulanmoz pronlpsawir aitafatirka photophotoshopquilbotReynald Fasciauxsearch engine optimization aiseo waawarbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada aiStudocuwakaalada suuqgeynta saamaynta ugu sareysa
Ms. Beganovich waa maamulaha guud iyo aasaasaha Camra & Elmas Iyadu waa saameeyn sare oo leh in ka badan 1 milyan oo raacsan dhammaan kanaalada. Waxaa loo magacaabay khabiir suuqgeyn dhijitaal ah oo sare oo ay leedahay Forbes, Insider Business, Financial Times, Entrepreneur, Bloomberg, WSJ, ELLE Magazine, Marie Claire, Cosmopolitan, iyo qaar kaloo badan. Waxay horumarisa oo maamushaa ololaha xayaysiinta ee shirkadaha Fortune 500, oo ay ku jiraan Johnson & Johnson, LVMH, Procter & Gamble, Uber, Nestle, HTC, iyo Huawei.
Lucidchart: Wada-shaqeyn oo arag Wireframes-kaaga, Gantt Charts, Nidaamyada Iibka, Automation-ka Suuqgeynta, iyo Safarrada Macmiilka
Qarsoodi ah: Ku Kordhi Iibka Bakhaarkaada Onlaynka ah adigoo isticmaalaya Platform Suuqgeynta Ecommerce oo Dhamaystiran